Zinedine Zidane Oo Jamahiirta Kooxdiisa Si Wayn Ugu Khilaafay Qaab Ciyaareedka Karim Benzema Ee Xili Ciyaareedkan Iyo Zidane Oo Markale Danilo Difaacay. – WWW.Gool24.net
Zinedine Zidane Oo Jamahiirta Kooxdiisa Si Wayn Ugu Khilaafay Qaab Ciyaareedka Karim Benzema Ee Xili Ciyaareedkan Iyo Zidane Oo Markale Danilo Difaacay.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa isku taagay in uu difaaco xidigaha kooxdiisa ee eedaynta wayn kala kulmay jamaahiirta kooxdiisa Los Blancos. Zidane ayaa si cad jamaahiirta kooxdiisa ugu khilaafay qaab ciyaareedka Karim Benzema ee xili ciyaareedkan wuxuuna sidoo kale siiwaday in uu difaaco Danilo oo 13 maalmood gudahood laba gool iskaga dhaliyay isla markaana sabab u noqday in Real Madrid laga reebay Copa Del Rey.
Jamaahiirta Real Madrid ayaa cod aqlabiyad ah ugu codeeyay in Karim Benzema kursiga kaydka la dhigo waxayna sidoo kale ku oriyeen Danilo kaas oo lumiyay kalsoonidii jamaahiirta Santiago Bernabeu kadib qaab ciyaareed aad u liita iyo laba gool oo uu iskaga dhaliyay Copa Del Rey.
Zidane oo ka hadlaya Karim Benzema iyo qaab ciyaareedkiisa xili ciyaareedkan ayaa yidhi: “Waxa uu qaadanayaa xili ciyaareed wayn. Waxa uu Karim leeyahay dabeecad iyo shaqsiyad uu xaaladaas ku aqbalo. Anigu markastaba waan taageerayaa isaga, xataa in ka badan si lamid ah dhamaan ciyaartoyda kale. Isagu waa No.9 ka Real Madrid, si la mid ah Morata iyo Mariano oo doorashada saddexaad ah. Anigu si isku mid ah ayaan ula dhaqmaa ciyaartoydayda”.
Zidane oo sii difaacaya Benzema ayaa yidhi: ” Benzema waa ciyaartoy cajiib ah, waxa kaliya ee aan isaga ku haysto ee aanan ciyaartoyda kale ku haysan waa luuqada, ma jiro wax kale. Miyuu wax badan bixin karaa? Haa, ka tababare ahaan waxaad markasta ciyaartoyda ka doonaysaa in ay si ka fiican bandhiga u sameeyaan. Anigu ma filayo in uu wax xun sameeyay, waxa uu dhaliyay goolal badanm wuu fiican yahay”.
Intaa kadib Zidane ayaa markale difaacay Danilo wuxuuna yidhi: “Isaga meesha ha ka saarina, markasta isagu waa diyaar wuxuuna doonayaa in uu ciyaaro. Waxa uu u baahan yahay caawinaada ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin sida qof kastaaba ugu baahan yahay. Waxaan anigu hubaa in barri ay jamaahiirtu isaga taageeri doonaan iyo kooxda oo dhan”.